अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा टोली चढेको कार दुर्घटनाग्रस्त, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा टोली चढेको कार दुर्घटनाग्रस्त, के छ अवस्था ?
काठमाडौ। चुनावी प्रचार अभियानमा रहेका अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको सुरक्षा टोली कार दुर्घटनामा परेको छ। अष्ट्रेलियाको तास्मानिया टापुमा चुनावी अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा टोलीको कार दुर्घटनामा परेको हो ।
पछाडिबाट आइरहेको अर्को गाडीले कारलाई ठक्कर दिएको जनाइएको छ। दुर्घटनाका क्रममा चार प्रहरी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। घाइतेहरुको अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ।
घाइते हुनेमा तास्मानिया राज्यका प्रहरी बलका दुई र अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीका दुई जना छन्। दुर्घटनाका बेला प्रधानमन्त्री भने उक्त कारमा नरहेको अष्ट्रेलियन सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेका परिवारलाई दुर्घटनाबारे जानकारी गराइएको जनाएको छ। आफ्नो सुरक्षा टोलीको कार दुर्घटनामा परेपछि प्रधानमन्त्री मोरिसनले उक्त चुनावी प्रचार कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । अष्ट्रेलियामा आगामी २१ मे मा संघीय निर्वाचन हुँदैछ।
त्यस्तै,युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अनुरोधमा अस्ट्रेलियाले युक्रेनमा सशस्त्र सैन्य ट्रकहरु पठाएको छ। रुसी हमलाविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्न युक्रेनलाई २० ओटा सैन्य ट्रक पठाउने प्रतिबद्धता अनुसार अस्ट्रेलियाले तीन ओटा ट्रकहरु पठाएको हो।
अस्ट्रेलियालले पठाएका शक्तिशाली बुसमास्टर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सेना र सर्वसाधारण पठाउन परियोग गरिनेछ। तर, तिनिहरुलाई आक्रमक हमलाका लागि भने प्रयोग गरिने छैन्।
जेलेन्स्कीले गत साता अस्ट्रेलियाको संसद्लाइ भिडियो सम्बोधन गरेका थिए। युक्रेनलाई गरेको निरन्तर सहयोगप्रति जेलेन्स्कीले अस्ट्रेलियालाई धन्यबाद दिएका थिए।
रुसी हमला सामना गरिरहेको युक्रेनले विभिन्न देशहरुसँग सैन्य सहयोग मागेका छन्। उनले विभिन्न देशका संसद्लाई भर्चुअल माध्यममार्फत् सम्बोधन गर्दै आएका छन्।
अस्ट्रेलियाले युक्रेनलाई सैन्य तथा मानवीय सहायता स्वरुप १९० मिलियन अस्ट्रेलियाली डल प्रदान गरेको छ। त्यस्तै , विश्व बैंकले रुस–युक्रेन युद्धले केही देशमा प्रत्यक्ष आर्थिक मन्दी ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले रुस, युक्रेन, बेलारुस, किर्गिजस्तान, मोल्दोभा, र ताजिकिस्तानमा प्रत्यक्ष आर्थिक मन्दी आउने र अन्य देशहरूमा समेत आर्थिक वृद्धिदर संकुचन ल्याउनसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
बैंकले युद्धका कारण युरोप र मध्य एशियासँगै धेरै देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई नकरात्मक असर पार्ने जनाएको छ। विश्व बैंकले युद्धका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष करिब ४५.१ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरूका कारण रुसको अर्थतन्त्र ११.२ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यस्तै बैंकले आर्थिक संकुचनको असर युरोप र मध्य एसियाली देशहरूका उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूले भोग्ने समेत विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रक्षेपणले जनाएको छ।
विश्व बैंकले रुसी आक्रमणका कारण पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा कोभिड महामारीले भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। युक्रेनका अधिकांश मानिसहरू युद्ध मैदानमा खटिएको वा शरणार्थी भई विदेश पलायन भएका कारण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको विश्व बैंकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
प्रक्षेपणले मध्य एशियाली देशहरूको रेमिट्यान्समा समेत युद्धका कारण धेरै असर पार्ने जनाएको छ।युद्धले विश्वव्यापी मन्दी ल्याउने, मुद्रास्फीति र ऋण बढाउने तथा गरिबी बढाउँने चिन्तालाई थपेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
बैंकले युद्धका कारण वित्तीय बजार, व्यापार, आप्रवासन र बजारको आत्मविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेकाले संसारभरको आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
युद्धले निम्त्याएको मानवीय सङ्कटको परिमाण भयावह रहेको र रुसी आक्रमणले युक्रेनको अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको युरोप र मध्य एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंककी उपाध्यक्ष अन्ना बियर्डले बताइन।
युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन तत्कालै ठूलो आर्थिक सहायता चाहिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले एकपटक फेरि रुसको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार रुसले युक्रेनीहरु सबैको ज्यान लिनसक्छ। तर सो क्रममा रुसीहरु पनि पृथ्वीबाट विलय हुने जेलेन्स्कीको भनाइ छ।सो क्रममा उनले युरोपेली देशमाथि आरोप लगाए। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्,
रुसबाट तेल खरिद गरिरहेका देशले रगतबाट लत्पत्तिएको कमाई गरिरहेका छन्।’जर्मनीसँग युक्रेन खुशी छैन। जर्मनीले रुसविरुद्ध केही प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेको छ तर तेल भने त्यहीँबाट खरिद गरिरहेको छ।
उनले समय अब उस्तै नभएको र यो व्यापार वा पैसाको कुरा गर्ने बेला नभएको पनि उल्लेख गरे। युक्रेनले बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाबेला युरोपले युक्रेनको साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ५० दिनयता रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ।
युद्ध थप चर्किने खतराबीच जेलेन्स्की निडर भएर भन्छन्,‘उनीहरुले हामीलाई नष्ट गर्न सक्छन् तर हामी यसको जवाफ दिनेछौँ, उनीहरुले हामीलाई मार्न सक्छन् तर तिनीहरु आफैँ पनि मारिने छन्। तिनीहरु यहाँ किन र के गर्न आएका हुन्, मलाई थाहा छैन।